ဖြစ်နိုင်ခြေ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဖြစ်နိုင်ခြေ…
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Jan 31, 2014 in Creative Writing, History, My Dear Diary | 30 comments
ဘုရားသမိုင်းကအစ… ၀ိဇ္ဇာသမိုင်း၊ နတ်သမိုင်း၊သိုက်သမိုင်း…နိုင်ငံရေးသမိုင်း..ပုဂံရာဇ၀င် စုံနေတာဘဲ၊ တော်တော်များများက
ရာဇ၀င်ဆရာ၊ သမိုင်းရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာတွေရဲ့ အနုပညာနဲ့ အတွေးချဲ့ ရင် ချဲ့ သလောက် ပေါ့…။
ကျနော်ငယ်ငယ်က မြန်မာ သမိုင်းကို တော်တော် စိတ်ဝင်စားတာ…စာကျက်လိုက်ရင် ခဏဘဲ…သမိုင်းကြောင်းကို ခြုံငုံပြီး..သိသွားတာ…။
စကားမစပ် ကျနော့်အဖေကတော့ သမိုင်းကို စိတ်မ၀င်စားပါဘူး…သူက ဘာသာပြန် တွေဘဲ ဖတ်တာ…အဲ ..သူက အတွေးကောင်းတယ်…ကျားကစား သိပ်တော်တယ်…။ သားသမီးတွေ အကုန်လုံးကို ကျားကစားတတ်အောင်သင်ပေးခဲ့ တယ်…။
အကြောင်းကိစ္စ တစ်ခု ကြုံလာရင် ကွက်ကျော်မြင်တတ်အောင်တဲ့ …။
အယောင်ပြ..တစ်ကောင်ကျွေးပြီး နှစ်ကောင်ရိုက်…ကင်းကြီးထိုးကျွေးပြီး ၃ကောင်ရိုက်..။
နည်းတွေစုံသလောက် အတွေ့ အကြုံရတယ်..ဘ၀မှာ ပြသနာတစ်ခု တွေ့ လာရင် အဖေပေးခဲ့ တဲ့ ကျားကစားနည်းပညာက တော်တော် အသုံးဝင်တာ…။
သမိုင်းနဲ့ စချီပြီး ဘယ့်နှယ့် ကျားကစားတာ ရောက်သွားလဲ ဆိုတော့…ဒီလိုဗျ..။
အလုပ်က ဇာတ်သဘင်ဆိုတော့ ဇာတ်နဲ့ နတ်က တွဲနေတာ…ဒါဟိုးရှေးအစဉ်အလာထဲက..။ ဇာတ်ပွဲမှာ ကပြမှုတွေ အောင်မြင်အေးချမ်းဘို့ ..အဆင်ပြေဘို့ဇာတ်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ပွဲတွေ ပေးရတယ်၊ နောက်ပြီး ဇာတ်မင်းသားမှန်ရင် နတ်သမိုင်း သိုက်သမိုင်းကို ဖတ်မှတ်လေ့လာထားမှ တော်ကာကြတယ်…။ နောက်ပိုင်းမင်းသားကြီးတွေဆို ပိုဆိုးပေါ့..။
ပန်တျာကြည်လင်…ပန်တျာ တင်တင်မြင့် တို့ ဆို ကိုဘုန်းကြွယ် မမြစိမ်းနဲ့ နာမည်ကျော်ခဲ့ တာ။ဇာတ်သဘင်တွေမှာ ကပြမှုများတာက ရေငံပိုင် ဦးရှင်ကြီး၊ ကိုးမြို့ ရှင် ပုလဲယဉ်၊အမေနံကရိုင်း၊ အမေရေယဉ်၊နဲ့ တောင်ပြုံးညီနောင်ပေါ့….။
ကျနော်က နတ်သမိုင်းတွေသိပ်မက ပေမယ့် လေ့လာ ဖတ်ရှုထားပါတယ်…ကိုယ်တိုင်ကလဲ စာဖတ်တာဝါသနာပါတော့…
ကျနော်သိပ်မကချင်တာက နတ်သမိုင်းရေးသူတွေ ဘယ်လောက်ဘဲ ဖွဲ့ နွဲ့ ရေးပေမယ့် ၃၇မင်းနတ်တွေ အားလုံးက အယူတိမ်းပြီး…အစိမ်းသေနဲ့ သေခဲ့ ကြတော့ ဦးချကန်တော့တာနဲ့ သရဏဂုံ ပျက်နိုင်တာကို သိလို့ ပါ..။သူတို့ ကို ကိုယ်က အားကိုးမယ့်အစား ကိုယ်ကတောင်မေတ္တာပို့ ပေးရဦးမှာ။
ဒါပေမယ့်ဗျာ…ဇာတ်မင်းသားဆိုတာက ဇာတ်ဆရာနဲ့ စာချုပ်ပြီးကတည်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ်မပိုင်တော့ဘူး၊ ဇာတ်ဆရာနဲ့ ပရိတ်သတ် အလိုကျ ကပြရတာပါ.။
ကျနော်တစ်နှစ်ကြုံရတာက ဇာတ်ဆရာက လူရွှင်တော်လဲ ကတယ်…နတ်ဇာတ်ထုပ်နောက်ပိုင်းတွေလဲ ကတယ်…ပြီးရင်
နတ်ပူးတာနဲ့ ..သူလုပ်ထားတဲ့ လက်ဖွဲ့ ကြိုးတွေကို ရောင်းတော့တာဘဲ..။ ရိုးသားတဲ့ သူတွေက ဘာမှ မစဉ်းစားဘူး…၀ယ်တာပေါ့..။
ကျနော်က သိတယ်..ဘာမှ မစွမ်းဘူး..မစွမ်းဆို နေ့ လည်တိုင်ဆို ယိမ်းသမလေးတွေ ကောင်လေးတွေကို သွားတိုက်ဆေး အခွံတွေနဲ့ အပ်ချည်ကြိုးအနီတွေ ကြိုးကျစ်ပြီး လုပ်ထားတာကို သူက ဖောက်သည်ဈေးနဲ့ ချုပ်ဝယ်တာ..ဘာသိဒ္ဓိမှ မရှိဘူး..။ယုံ…။
ရွာတစ်ရွာမှာကတော့ ကျနော်နဲ့ တိုးတာဘဲ..။ အဲဒီရွာကလဲဗျာ…တစ်ရွာလုံး ကိုကြီးကျော် ခေါင်းစွဲတဲ့..။ ကျားမ မရွေး…ကိုကြီးကျော်ဘဲ။ ရွာသားတွေက တောင်းဆိုတာ ဒီည ကျော်လေးကျော်( ကိုကြီးကျော်၊ပခန်းကျော်၊ဇီးတောကျော်၊ တောင်သမန်ကျော်) အော်ပဒါကပေးဘို့ …။ တစ်ယောက်ထဲ ကို လေးမျိုးနဲ့ ဗျ..။ကန်တော့ပွဲတွေဗျာ…ဇာတ်စင်ပေါ်မှာ အပြည့်ဘဲ…
ဒီတော့ဇာတ်ဆရာက ပေသီးခေါက်ပြီ…ကန်တော့ပွဲတွေထဲမှာကလည်း ပိုက်ဆံတွေ ဖွေးနေတာဘဲလေ..။ သူကလက်ဖွဲ့ ရောင်းကောင်းမှာလဲ သေချာသိနေတော့…သူကိုယ်တိုင်မကတော့ဘူး…ကျနော့်ဘက်လှည့်လာတာ။
ငြင်းလို့ လဲမရဘူး…ဦးက ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ်တိုင်မကလဲမေးတော့ အလုပ်များလို့ တဲ့ ..။ညာတာ။။သိတယ်။
ကျနော်က နတ်မပင့်တတ်ဘူး…ပင့်လဲ ကြွမှာမဟုတ်ဘူး ပြောပြီး ငြင်းပါသေးတယ်..။ဟန်ဘဲလုပ်ပေးပါတဲ့ ။
ညကျတော့ ဟို၃ယောက်ကတော့ အူမြူးနေတာပေါ့…ကြက်ပေါင်ဆွဲမယ်…အအေးချမယ်..အရက်မော့မယ်…ဂွင်ကြီးမိတယ်ပေါ့။
ရှေ့ မှာ ဇာတ်လမ်းခင်းပြီးလို့နတ်တွေ ပင့်စာရွတ်တာနဲ့ ဘေးက ၃ယောက်ကတော့ တုန်တော့တာဘဲ…တစ်ကောင်မှ
နတ်မ၀င်ဘူး…သူတို့ က ညဦးထဲက တုန်ချင်နေကြတာ။
ပြီးတာနဲ့ နတ်ယိုင်ဒိုးနဲ့ ကတာပေါ့..မြူးနေတာဘဲ…ကိုယ့်မှာသာ သပြေပန်းစည်းလေးကိုင်ပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ…မေ့ ပြီး သူတို့ ကတာကို ငေးနေတာ..။ကြည့်လို့ တော့ကောင်းသားဗျ။
ဒိမောင်တွေ နတ်ကတာနဲ့ အောက်က ရွာသားတွေကလဲ နတ်ခေါင်းပေါင်းကို ပိုက်ဆံတွေ လာဆက်တာ နည်းတာမဟုတ်ဘူး….
ဒါ သူတို့ ရမှာလေ…ကိုယ့်မင်းသားတွေ ပိုမြူးပြီပေါ့ အရက်လေးမော့လိုက် ၊ကြက်ပေါင်လေးဆွဲလိုက်နဲ့ …
လှည့်ကနေရင်း ပရိတ်သတ်မကြားအောင် ကိုယ့်ကိုတောင် တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောသွားသေးတယ်…
“ အကို…၀င်ကတော့လေ..အကိုက အကြီးဆုံးနတ်ဘဲ…ရှယ်ကြီးနော်…အပီသာဆွဲ…” တဲ့ …။
ကြည့်လို့ မှ မဆုံးသေးဘူး…ပွဲခင်းထဲက ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်လာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ သန်သန်မာမာ လူနှစ်ယောက်နဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ ဇာတ်စင်ပေါ်ခုန်တက်လာပြီး…ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကို ကတော့တာဘဲ…။
က နေရင်းနဲ့ နတ်ကနေတဲ့ မင်းသားတွေကို မပြောမဆို ပါးဝင်ရိုက်တာဗျာ…ဖြန်းကနဲဖြန်းကနဲဘဲ…ပွဲခင်းတစ်ခုလုံးလဲ ရုန်းရင်းခတ်နေတာ။
ကိုယ့်ကောင်တွေထိုင်ရက် လဲတောင်ကျတယ်။ ခေင်းပေါင်းပုဝါတွေလဲ ကျွတ်ပြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဘဲ…။
ကျနော်လဲ လန့် ပြီ…ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်နေမှန်းကို မသိတာ…။
အဲဒီကျမှ လက်ဖွဲ့ အော်ရောင်းနေတဲ့ ဇာတ်ဆရာ ကားလိပ်ကြားထဲကနေ…ပေါ်လာတာ..သူလဲ ကြောက်နေတာ….။
“ ဟာ…ပုဂ္ဂိုလ်စစ်တွေ ၀င်လာတာ…မင်းသား ကိုကြီးကျော်ကို မြန်မြန်ပင့်တော့ ..သူက ခေါင်ချုပ်ဘဲ..လုပ်လုပ် မြန်မြန်ပင့်” တဲ့ ..။
မြန်မြန်ပင့်လို့ ၇တတ်လားဗျာ…..စက်ဘီးနင်းတာမှ မဟုတ်တာ…နတ်ပင့်တာပါဆိုမှ ။
နတ်ဝင်ဘို့ နေနေသာသာ…နတ်လာအောင်ဘယ်စာနဲ့ ခေါ်ရမှန်းတောင်မသိတာ..။
ဒါပေမယ့် စင်ပေါ်မှာ အခြေအနေက လုံးဝမကောင်းတော့ ပါးရိုက်ခံရဘို့ က ကိုယ်တစ်ယောက်ဘဲ ကျန်တော့တာ…ဒါတောင် သပြေပန်းစည်းလေးကိုင်ပြီး စင်ပေါ်က ဌက်ပျောပင်လေးကိုကွယ်ပြီး ရပ်နေလို့ …။
ကိုယ့်ဘက်က ၃ကောင် ကျွေးလိုက်ရပြီ…။ ပရိတ်သတ် ထောင်သောင်းရှေ့ မှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသား ပါးရိုက်ခံရလို့ တော့ မဖြစ်။
သူတို့ က ပုဂ္ဂိုလ်စစ်တဲ့ …..။
လာမလုပ်နဲ့ဘယ်နတ်ဝင်ဝင်…တစ်ယောက်မှ မှတ်ပုံတင်ပါလာတာမဟုတ်ဘူး….။ ပါးစပ်ပြောဘဲရတာ..။
စက္ကန့် နဲ့ အမျှ စင်ပေါ်ဝဲယာမျက်စေ့ ကစားလိုက်တော့….တွေ့ ပြီ…။
နတ်အော်ပဒါကဘို့ ရွာတော်ရှင်အဘိုးကို ပင့်ဖိတ်ပြီး ဆက်ထားတဲ့ ရွာတော်ရှင်ဓါး….။
ဌက်ကြီးတောင်ဓါးလိုဘဲ အရှည်ကြီး…ထိုင်းက ၀ယ်လာတာတဲ့ ..ဓါးသွားပေါ် ဆံပင် တင်ရင်တောင်ပြတ်ကျတယ်ဆိုဘဲ…။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတာနဲ့လွှားကနဲ ကန်တော့ပွဲတွေကို ခုန်ကျော်ပြီး…ကျနော် ဓါးကို ဆွဲယူပြီး…မွှေ့ ကစားရင်း….
“ ဟိတ်” ဆိုအော်လိုက်ပြီး ပြန်ခုန်လိုက်တာ…။ဦးအောင်ဇေယျနယ်သားတဲ့ ဟေ့…။
ကျနော်လှုပ်တာနဲ့ အောက်က ဆိုင်းဆရာတွေကနပ်တယ်…နတ်ဆိုင်းကို မြူးနေအောင်တီးတော့တာ…..။
ကိုယ့်ကို ၀ိုင်းလာတဲ့ ကိုကြီးကျော် ၃ ယောက်လုံးကို ဓါးနဲ့ ကာပြီး ပါးကို အသားကုန် တစ်ဖြောင်းဖြောင်းနေအောင် တန်းစီပြီး ရိုက်ထည့်ပစ်တာ…။ကျနော်ကဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ရင်းလိုက်တာ….။ ။
၃ ကောင်ကျွေးပြီး ၃ကောင်ပြန်ရိုက် ၊ ကင်းကြီးဝင်တဲ့ အကွက်…။
ဟိုနတ်၃ပါးလဲ ဘယ်လိုဖြစ်လဲ မသိဘူး…တုန်တုန်ရင်ရင်နဲ့ ကျနော့်ကို ဦးချပြီး စင်ပေါ်မှာဘဲ ခွေလဲ ကျသွားတာ…
ဒါတောင်တစ်ယောက်က ကျနော့်ဒူးခေါင်းကို ဖက်ပြီးမှ ထွက်သွားတာ…။
ဒါတောင် ရှေ့ နောက်စိတ်မချလို့ ဓါးကို အသားကုန်မွှေ့ ပြီး ဌက်ပျောပင်တွေ ပါ အပိုင်းပိုင်းဆွဲခုတ်ပစ်သေးတာ…နောက်ကျောမလုံလို့ …။ တော်ကြာနောက်ကပါတ်တက်လာရင် ဘယ့်နှယ့်လုပ်မလဲ….။
အခြေအနေ အေးတယ်ထင်မှ ကိုယ်လဲ နန်န န့် ၊ နန်န့ န့် လုပ်ပြီး ဟန်လေးလုပ်ကရဲတာ…။
အောက်က ပိုက်ဆံတွေ လာဆက်တာတောင် စိတ်ကမအေးလို့ …လက်လေးနဲနဲတုန်ပြီး ခွေချပစ်လိုက်တာ….။
ဆိုင်းကလဲ နတ်ပို့ ဆိုင်းလေးနဲ့ ပေါ့ဗျာ…။
ဇာတ်ရုံနောက်မှာတော့ မင်းသားငယ်၃ ယောက်နဲ့ ဇာတ်ဆရာ စကားတွေ များနေကြလေရဲ့ …။
အဲဒီညက အဖေ့ကို သတိတွေရပြီး ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ…။
ညက ကျနော်သုံးလိုက်တာ ၃ ကောင်ကျွေးပြီး ကင်းကြီးဝင်တဲ့ အကွက်လေ…။
ဟိုး….ရခိုင်မှာ ဖြစ်ခဲ့ တာက ပိုဆိုးသေးတယ်..။
ကျနော်တို့ အဖွဲ့ ကို ကြိုက်လို့အဲဒီမြို့ က ပြန်ဌားတာ ဒါရောဆို ၃ ခါ ရှိပြီ…၉ ညပေါ့…။ဒီတော့ ဇာတ်လမ်းတွေက ထပ်ပြီပေါ့…။
ပြဇာတ်အသစ်ရေးရတာ၊ ပြဇာတ်တိုက်ရတာက ပင်ပန်းတယ်…။
ဒီကြားထဲ အော်ပဒါ က စီစဉ်ရသေးတယ်…။ ဒီညတော့ ဇာတ်ဆရာ အကြံပေးလို့ “ ပုပ္ပါးမယ်တော် သားနှစ်ဖော်”
တောင်ပြုန်းညီနောင် အော်ပဒါ ကဘို့ စီစဉ်တာပေါ့…။
ကျနော်က အဖြည့်သဘောနဲ့ ကိုဗျတ္တနေရာက …ကမှာ..။ သူငယ်ချင်း ဇင်မက ပုပ္ပါးမယ်ဝဏ္ဏ..။
လက်ထောက်မင်းသားငယ်ဖြစ်တဲ့နိုင်အောင်နဲ့ အောင်ဆန်းမင်းက တောင်ပြုံးညီနောင်…ဖျဉ်းကြီး ဖျဉ်းလေး..။
ကျနော့် တပည့်ကျော်ကြီး ( ပြဇာတ်တုန်းက ကြိုးဆွဲချတုန်း ကြိုးဖြုတ်မှားတဲ့ ကျေးဇူးရှင်) မောင်မောင်က မင်းကျန်ရစ်။( တစ်ချို့ က မင်းကျန်စစ်နဲ့ မှားတယ်) သူကလဲ ဘုန်းကြီးလူထွက်ဆိုတော့ စာစကားများများပြောနိုင်တယ်…။
ဒါတောင်သူက ဒီနေရာက မက ချင်ဘူး…တောင်ပြုန်းမင်းနေရာဘဲ က“ချင်တယ် လုပ်သေးတာ…။ ကျနော်က ဟို၂ ယောက်က ငယ်တယ်…ခင်ဗျားက အသက်နဲနဲ ကြီးတယ်…မင်းကျန်ရစ်နေရာက အခန့် က” ဆိုတော့
ဂုန်း( လူကြမ်းဆန်ဆန်) နေရာမို့မကချင်ဘူးလုပ်နေတာ…။
မဟုတ်ပါဘူး….တစ်ကျပ်ဝန်….၀န်နီက လူကြမ်း…၀န်စိမ်းက နောက်လိုက်….မင်းကျန်ရစ်က ဇာတ်ပို့ ဘဲ ဆိုပြီး အတင်းရှင်းပြရတာ..။
နောက်ဘယ်လိုမှ ငြင်းမရလို့ ကတာ…။သူ့ အဖေကတော့ ကျရာနေရာက ကပေါ့…လို့ ဝင်ပြောပေးတယ်…။ကိုမောင့်အဖေက နှဲဆရာ သိပ်တော်တာ…နှဲ၂ လက်ကို ပါးစပ်ထဲမှာ တစ်ပြိုင်တည့်ထည့်မှုတ်နိုင်တယ်…လက်တစ်ဖက် နှဲတစ်လက်ဘဲ…။ ရွှေတံဆိပ်ရ…။
သူ့ ခေါင်းကတော့ အမြဲတန်း ကတုံးကို ပြောင်နေအောင်ရိတ်ထားတာ…။ ပညာတတ်ပေမယ့် လူကပ်…လူတတ်ဗျ..။
ဒီလိုနဲ့ညရောက်တော့ က” ရော ဆိုပါတော့ ..ကိုယ်က အစပိုင်းဘဲ ပါတာလေ…ကိုဗျတ္တ သေပြီးတော့ ကိုယ့်အခန်းပြီးပြီဆိုတော့အေးဆေးပေါ့…။ ကျန်တာ သူတို့ ဆက်က မှာ…။
ကိုယ့်အခန်းမှာလဲ ဂစ်တာတီးတဲ့ဝိုင်းခေါင်းဆောင် ကိုရွှေမြိုင်နဲ့အတူ…ကောင်မလေးတွေနဲ့ ကြူနေတာလေ….။
ခဏနေတော့ ဇာတ်ဆရာ အခန်းထဲ ပြေးဝင်လာပြီး…
“ ဝေ့…သား၊ ကြည့်လုပ်ဦးဝေ့…ဇာတ်စင်ပေါ်မှာ သတ်နေကုန်ရာ” ဆိုပြီး လာပြောပါရော….
“ ဟို၂ယောက်ကတော့ ဟိုနတ် ၂ယောက်ဘဲ…မောင်မောင်က ဇာနတ်ဝင်လဲ မသိရာ…..ဟို မန်းသားချေတွေ သေဘို့ ရာ…
ပုပ္ပါးမယ်တော်နဲ့ သား၂ပါးဘဲ ၀င်ကြွရမှာ…ကိုမောင်က ဘာနတ်ဝင်လို့ တုန်ပြီး တောင်ပြုန်းညိနောင်ကို လှိမ့်ကန် လှိမ့်ရိုက်လုပ်နေတာလဲ…။ ဟို၂ယောက်လဲ လိမ့် နေတာဘဲ..။လွန်လွန်းတယ်ဗျာ…ပါးနားရိုက်ပြီး လဲနေတဲ့ နိုင်အောင်ကို ရင်ဘတ် ဆောင့်နင်းနေတာ…
ဒါနဲ့ ကိုယ်လဲ ကားလိပ်ကြားထဲကနေ…..
အံမယ် ကိုယ်တော်က ခေါင်းမှာလဲ ပ၀ါနီ ၊ ရင်ဘတ်မှာ ပုဝါစိမ်း၊ လက်မှာက လှံကြီးနဲ့ …..မျက်လုံးကြီး ပြူးပြီး ကျနော့်ကို လက်ညိုးထိုးပြီး လှမ်းအော်တယ်….
“ ငါ…ကျန်စစ်သားနတ်…ဟေ့” တဲ့ ။
ကြားမကြားဘူးပေါင်ဗျာ…ကျန်စစ်သားနတ်လို့ …ပုဂံရာဇ၀င် တုတ်ထမ်းပြီး ပြောရမယ်လို့ စာဆိုရှိပေမယ့် ၊ သူရဲကောင်းကျန်စစ်သား နတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ တစ်ခါမှ မကြားဘူးပါဘူး…။
တစ်ချက်စဉ်းစား ကြည့်လိုက်မှ အဖြေပေါ်တာ….။ ကျနော့်ကိုရွှီးလို့ ရမလား…ကိုမောင်ရယ်။
ခင်ဗျား…ဘုန်းကြီး လူထွက်ဖြစ်ပြီး…နတ်သမိုင်းမှ မကျေတာ….။ ညနေကတည်းက တောင်ပြုန်းမင်းနေရာက မ က” ရလို့ခင်ဗျားတင်းပြီး…ပယ်ပယ်နယ်နယ် သမနေတာ…သိတာပေါ့….။
ဒေါသကလဲထွက်လာတယ်…။ ကိုယ်သင်မှ မင်းသားဖြစ်၊ ကိုယ်တင်မှ စင်ပေါ်ရောက်….။
ကိုယ်ဇာတ်စီးပေးလို့ ဒီအော်ပဒါ ကရတာ…ကိုယ့်ကို လာပါတ်နေသေးတယ်…။
လှေကြီးပေါ်မှာ လှေငယ်တင်၊ ဇာတ်ကြီးပေါ်မှာ ဇာတ်လေးလာထောင်တာ…။
ကိုရွှေမြိုင်လက်ထဲ မိုက်ခ် ထည့်ပေးပြီး…မှာစရာရှိတာ..မှာရင်း….
“ ဟိတ်…မင်းတို့ ပုဝါ စတွေ ငါ့ကို ပေးစမ်း ” နီးရာ ယိမ်းမင်းသမီးလေးတွေဆီက ပုဝါနှစ်စယူပြီး…
တစ်စကို ရင်မှာစည်း…တစ်စကို ခေါင်းမှာပတ်လို့ …သံလျှက်ကိုဆွဲယူပြီး…ကိုရွှေမြိုင်ကို အချက်ပေးလိုက်တာနဲ့ …
“ မိုး..းးးး” ဆိုတဲ့ အသံကို ဟိန်းနေအောင် အော်လိုက်တော့…အောက်က ဆိုင်းဆရာတွေလဲ ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ နတ်ပင့်ဆိုင်းတီးတော့တာပေါ့…သူတို့ လဲ နတ်တွေများပြီး အပေါ်မှာ တစ်ကယ်ဆော်နေလို့ လန့် နေတာ….
မိုးးးးး ဆိုတာ ဇာတ်အထာနဲ့နတ်ပင့်ဆိုင်းတီးဘို့ အချက်ပေးတာ…။
နတ်ပင်းဆိုင်းဆုံးလို့ ပါတ်မကြီး တဗိန်းဗန်းတီးနေတုန်း………
“ အနော်ရထာ နတ်တဲ့ ဟေ့……………..” လို့ ကိုရွှေမြိုင်အော်တာနဲ့ …
ကိုယ်လဲ တစ်ပါတ်ကျွမ်းပစ်ပြီး လွှားကနဲ ခုန်ဝင်သွားတော့ ကျန်စစ်သားနတ် ကြောင်ပြီး ကြည့်နေတုန်း….
သူ့ ရင်ဘတ်ကို ဖလိုင်းကစ်နဲ့ တွန်းကန် ကန်ပစ်လိုက်တာ ကျန်စစ်သားနတ် ကိုမောင် ဇာတ်စင်ထောင့် ကိုလွင့်ပြီး ခွေလဲသွားတာ…။
ကိုယ်ကလဲ ခြေမြန်လက်မြန် သူကျနေတဲ့ လှံကိုပါ ကောက်ယူပြီး…သူ့ ရင်ဘတ်တက်နင်းရင်း …
“ သားတော်…ကျန်စစ်သား…နတ်နန်းကို အမောင် ပြန်ဘို့ အချိန်ကျလေပြီ….ယခုပြန်လျှင်ပြန်…မပြန်ရင် ခမည်းတော် ထပ်ပြီးဆုံးမ
…အောင်မယ်…ငိုမဲ့ ငိုမဲ့နဲ့ ကျန်စစ်သားနတ် ပြန်ကြွသွားတယ်ပေါ့လေ…တုန်တုန် တုန်တုန်နဲ့ကန်တော့ပြီး ခွေလှဲချလိုက်တာ…။
ကိုယ်လဲ မဆီမဆိုင်ပြီးတာနဲ့ ဘေးနားမှာ ခပ်ကြောက်ကြော်ရပ်ကြည့်နေတဲ့ပုပ္ပါးမယ်တော် ပုခုံးကို ဆွဲဖက်ပြီး…..
“ အနော်ရထာနတ်တဲ့ ဟေ့…..” လို့ အော်ရင်း ကားချဘို့ အချက်ပေးလိုက်၇တာ…
ကိုယ်လဲ မြန်မြန်သိမ်းမှ…။ နဲဆရာက မကြည်တဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်နေတာ သိတယ်…။
သူက ဆံပင်တစ်မွှေးမှ ရှိတာမဟုတ်…။ ကတုံးကြီး..။
သူသားက ကျန်စစ်သားနတ်ဆိုတော့ ကိုယ်က သူ့ ထက်ကြီးတဲ့ အနော်ရထာနဲ့ ဝင်သမ ထားတာ…။
ဇာတ်ထဲမှာကလဲ ဇာတ်သုံး သင်္ကန်းတွေ က ပေါပါဘသိနဲ့ ….။
“ ရှင်အရဟံ…ရဟန်းကြွလာတယ်ဆိုပြီး..ကိုယ့်ကို ပါးဝင်ရိုက်နေရင် ကိုယ်ခံရမှာ….။
ပုဂံ ရာဇ၀င်ကို ခေါင်တို့ က သိပြီးသား…အဟေးးးဟေးးးး။
ပြဇာတ်ပြီးတော့ ကိုရွှေမြိုင်က ပြောတယ်…
“ ဇော်…မင်း..သမ လိုက်တာ နည်းနည်း အရှိန်များတယ်ကွ…မင်းလူ အခုထိခွေပြီး ငိုနေတုန်းဘဲ”
“ အို…နတ်ဝင်သွားတာ..ကျနော်တောင်မသိလိုက်ဘူးဘဲ ပြောရမှာပေါ့…”
“ မင်းကလဲ…..အဘိုးကြီးက စာတတ်တယ်နော်…အနော်ရထာနတ် လို့ မှ မရှိတာ”
“ ကျန်စစ်သားနတ်ရော…ကြားဘူးလို့ လား…”
“ အေး…အဘိုးကြီးက မနက်ကျ စာရင်းရှင်းမယ် ပြောနေတယ်…မင်းကြည့်လုပ်ဦး”
“ ရတယ်….သမိုင်းမှာ…ဟာကွက်ရှိတယ် မပူနဲ့ …ကဲလုပ်..ခဏနေ နှစ်ပါးသွားထွက်ရမှာ…”
ထင်တဲ့အတိုင်းပါဘဲ မနက်မိုးလင်းလို့ မိတ်ကပ်ဖျက်ပြီိးတာနဲ့ နှဲဆရာက ဇာတ်ဆရာကို အစည်းအဝေး ခေါ်ပေးဘို့ လုပ်တော့တာ…
တစ်ဖွဲ့ လုံး လူစုံပါဘဲ…။အဓိက က ကျနော့်ကို တည်တာပေါ့….။
“ နေပါဦး…မင်းသားရဲ့ …ညက အော်ပဒါကတော့.. နောက်ဆုံး ၀င်ကြွလာတာ အနော်ရထာနတ်လို့ ကြားလိုက်လို့ ပါ”
“ ကျုပ်ဇာတ်ထဲ လိုက်ပြီးနှဲမှုတ်လာတာ ကြာပြီ…ခြေသလုံးကို တုတ်နဲ့ ရိုက်ရင်တောင် စည်တိုသံ ထွက်နေပြီ…အနော်ရထာနတ်လို့ တခါမှ မကြားဘူးပါဘူး….”
“ နတ်က သူ့ ဘာသာ…၀င်လာတာဗျ…”
“ ကျုပ်သိတာက အနော်ရထာဆိုတာ ပုဂံပြည်ကို ရှင်အရဟံ ကျေးဇူးနဲ့ သထုံကနေတစ်ဆင့် ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့် ပွားလာအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်ဘဲ…”
“ ဘုရားတွေ ဆိုလည်း တည်ထားလိုက်တာ…လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ ပုဂံဘုရားပေါင်း လို့ တောင် မှတ်သားရတာ မဟုတ်လား…”
“ မှန်တာပေါ့ ဦးရယ်…”
“ ဦးက ဘုရားတွေတည်တာဘဲ ကြည့်တာကိုး…..ဘုရားတည်တယ်ဆိုတာ သာသနာပြုခြင်း အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူး….ဘုရားသာသနာပြုတယ်ဆိုတာ…ဘုရားစေတီတွေတည်တာနဲ့ မပြည့်စုံဘူး….နောက်ပြီး….အနော်ရထာမင်းကြီး သာသနာ
သန့် ရှင်းတယ်ဆိုပြီး….တစ်ချို့ ကိုထောင်ချ နတ်တွေကို လှောင်ထား၊ နဲ့ မကျေနပ်သူတွေရှိခဲ့ တယ်..”
“ ပုဂံခေတ်က ကျောက်စာတွေ အများကြီးဘဲ…ကျန်စစ်သားရဲ့ သားဖြစ်တဲ့ ရာဇကုမာရ ကျောက်စာက အစ ရှိတယ်…”
စာရေးဆရာတွေက စာအုပ်တွေ ရေးပြီးမှတ်တမ်းတင်ကြတယ်…”
“ အဲဒါနဲ့အနော်ရထာ ဘာဆိုင်လို့ တုန်း….”
“ ဆိုင်ပါသော်ကောဦးရယ်…..အနော်ရထာလောက် ဘုရားတွေ မတည်ပေမယ့် တရားကို တစ်ကယ်ကျင့်လို့ အနာဂမ်ဖြစ်သွားတာကို တိုင်းပြည်က အသိအမှတ်ပြုတယ်….”
“ တိုင်းခန်းလှည့်ရင်း…ထီးချက်စောင့်နတ်က ကျွဲယောင်ဆောင်ပြီ်း ၀င်ခတ်လို့အနော်ရထာ ကျွဲခတ်ခံရပြီး အစိမ်းသေ သေခဲ့ တယ်…
ဘုရားတွေ တည်ခဲ့ ပေမယ့်လို့ ….ပုဂံတပြည်လုံးက ကျောက်စာတွေထဲမှာ အနော်ရထာ ဘုရင်ကြီး သောတာပန် ဖြစ်သွားတယ်လို့ များ ကြားဘူးလား…..အနာဂမ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ များကြားဘူးလို့ လား…”
“ အင်း…ဒါတော့ မကြားမိပါဘူး…..”
“ သူသာ…ဘုရားတွေတည်သလောက် တရားကျင့်ခဲ့ရင် ဗျာ…တစ်တိုင်းပြည်လုံး…အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဘုရင်ကြီးဘဲ…တိုင်းသူပြည်သားက ကျောက်စာ မရေးဘဲ နေမတဲ့ လား…”
“ ကျနော် ထင်တယ်…တိုင်းခန်းလှည့်နေရင်း…သူက ဘုရင်ကြီးဟေ့ ဆိုတဲ့ မောဟ ၀င်နေချိန်မှာ ကျွဲဝင်ခတ်လိုက်တော့…တရားသတိရှိမှာ မဟုတ်ဘူး…ဒါကြောင့် အစိမ်းသေနဲ့ သေပြီး ညက နတ် အဖြစ် ၀င်ကြွလာတာ ဖြစ်နိုင်တယ်…ဦးရဲ့ ”
“ အေးပေါ့လေ……ဒါလဲ ဖြစ်လောက်ပါရဲ့ …”
ပြီးတာနဲ့ နှဲဆရာသားအဖလဲ ပါးစပ်က ပွစိပွစိနဲ့ တပ်ဆုတ်သွားရော…။
အစည်းအဝေးကတော့ အောင်မြင်စွာပြီးသွားပါပေါ့….။ သူကချည်လာတော့ ကိုယ်ကလဲ ပြန်ချုပ်၇တာပေါ့…။
အနော်ရထာကိုတော့ အားနာပါရဲ့ …
တော်သေးတယ် ကိုယ်က စာဖတ်လို့ ….။
ဒါကြောင့် သမိုင်းဆရာကြီး ဒေါက်တာ ဦးသန်းထွန်းကပြောတာ…
“ သမိုင်းသင်တာ…မအ အောင်….” တဲ့ ..။
ကျနော် လက်ခံတယ်…ကျနော်တို့ က သမိုင်းလိမ်တွေကြားမှာ ကြီးခဲ့ ရတာ…ရှေးက သမိုင်းတွေကိုး။။
ခုတော့ သမိုင်းက ပြောင်းလာပြီ…ခေတ်က ပြောင်းလာပြီ…။
ကျနော်တို့ကလေးတွေ အလှည့်မှာ….သူတို့ တွေ မအ အောင် ၆၂ ခု သမိုင်းကနေ ဒီနေ့ သမိုင်းအထိ သေချာ ပြောပြသင့်တာ…။
ကလေးတွေ သမိုင်း မအ” ရအောင်ပေါ့…။
ဟိုတုန်းကတော့ နှဲဆရာ သားအဖရန်အတွက်အေးအောင် ပြောခဲ့ရတာ…။
အခု ဒီစာရေးနေရင်းမှ ပြန်တွေးကြည့်နေတာ….
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဘုရင်လုပ်ရင်း၊ ဘုရားတွေ တည်ခဲ့တဲ့ အနော်ရထာဘုရင်ကြီး…..
ပြောရမယ်ဆို နောက်ပိုင်း သမိုင်းကို ပျောက်သွားတာ…။
အနော်ရထာဘုရင်တောင် ဒီလာက်လုပ်ရက်သားနဲ့ သောတာပန်တောင်မဖြစ်တာ…
ဒင်းကြီး…တစ်ယောက် ခုမှ စာအုပ်လေး ဖတ်ချင်ယောင်ဆောင်နေရုံလောက်နဲ့ ကတော့…
မြန်မာပြည်မယ် အခြေခံဥပဒေပြုခဲ့တာ… ၃ခုရှိတာမှာ.. ၂ခုဟာ.. ၁၄စည်းထဲဝင်တယ်ဗျ..
1947 Constitution = 1948 to 1962 ( ၁၄နှစ်)
1974 Constitution = 1974 to 1988 ( ၁၄နှစ်)
2008 Constitution = 2008 to 2022? (OR) = 2004 to 2018?
၁၉၆၂ မှာ ဘိုနေ၀င်းအာဏာသိမ်းပြီး ဖျက်လိုက်တဲ့…. ၁၉၄၇ ခြေဥဟာ.. ၁၉၇၃မှာ အသစ်ပြန်ဆွဲတယ်..။
၁၉၈၈ မှာ ဘိုစောမောင် အာဏာသိမ်းပြီးဖျက်လိုက်တဲ့.. ၁၉၇၄ ခြေဥဟာ … ၁၉၉၃မှာ ပြန်ဆွဲဖို့လုပ်တယ်..။ ၁၉၉၆မှာ ဒီချုပ်ထွက်လိုပျက်တယ်..
၂၀၀၄မှာ ပြန်လုပ်တယ်..။ ၂၀၀၈မှာ အတည်ပြုတယ်…။
၂၀၀၈ ခြေဥမှာ ချွင်းချက်ရှိမလားတော့ မသိ..။
သေချာတာကတော့… ဒီဘာသာရေး.. ဒီမိုး.. ဒီမြစ်.. ဒီလူတွေနဲ့.. ဖျက်ရ/ပျက်မှာပါပဲ..။
စာဖတ်ပြီး လေကျားထိုးနေတဲ့… ဟိုပုဂ္ဂိုလ်သေရင်.. တခုခုဖြစ်မယ့်ပုံ..။
ကိုရင်ခေါင့်စာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး..” ဖြစ်နိုင်ခြေ… ဖြစ်နိုင်ခြေ”ရေးကြည့်နေတာ….
သောတာပန်.. ရဟန္တာ.. စတဲ့အရိယာအဆင့်တွေက.. သေပြီးမှသွားရတဲ့နေရာတွေလို့မယုံကြည်ပါဘူး..
အသက်ရှင်သန်နေတဲ့ တလံမျှလောက်သော ခန္ဓာမှာတင်ရှိနေတာလို့… ယုံကြည်ပါကြောင်း.. :buu:
သောတာပန်.. ရဟန္တာ.. စတဲ့အရိယာအဆင့်တွေက.. သေပြီးမှသွားရတဲ့နေရာတွေလို့မယုံကြည်ပါဘူး..”
မသေခင် ကျင့်ကြံရမယ့် တရားတွေပါ…။ မသေခင်မှာဘဲ ကျင့်ကြံရင်း မဂ်သဘောအရ သိနိုင်ပြီး အေးငြိမ်းနေစေတဲ့ နယ်ပယ်ပါ..။
နတ်ပွဲ နှစ်ပွဲလုံး ၀င်သမတာတော့ မျက်စေ့ထဲတောင်မြင်လာပြီးပြုံးမိတယ် ဆြာခေါင်(အနော်ရထာနတ်)ရေ…
အော်မေ့လို့…. ခုမှ စာအုပ်လေး ဖတ်ချင်ယောင်ဆောင်နေ တဲ့လူဂျီးရဲ့ “ဖြစ်နိုင်ခြေ” က အ၀ီစိပဲဗျ
အကိုမိုက် ကသာ ဖတ်ရင်းပြုံးတာ…
အဲ့အချိန်တုန်းက ကျနော်လဲ အမြန်စဉ်းစားပြီး အလုပ်သင့်ဆုံးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်ရတာ..
ကျောကတော့ မလုံတာ အမှန်ဘဲဗျ…
ဟို နှဲဆရာတွေက မာန်အောင်းကျွန်းက လူမိုက်တွေဗျ.. နာမည်ကြီး…။
ဟို နတ်၃ ယောက်လဲ ကိုယ်က ပိုကြမ်းမှ ရမှာမို့ဟိတ်သုံးလိုက်တာ.. စိတ်ထဲကတော့ တစ်ကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်စစ်ဖြစ်နေရင်
ကျနော့် အမှုက ကြီးတယ် ဗျ..
ကိုယ်က ဒါးယောင်ပြပြီး ပါးဝင်ရိုက်တာ…
ဟိုတစ်ယောက် ထွက်ကာနီး ကိုယ့်ဒူးကို( ခြေထောက်ကို) လာဖက်ပြီး တုန်နေတုန်းကဆို
“ ငါ့များ ကုန်းကိုက်ဘို့ လား” တွေးပြီး သူ့ ခေါင်းကို လက်နဲ့ အတင်းဖိထားတာ…
ဟုတ်တယ်လေ…နတ်တွေရော ကုန်းပြီး မကိုက်ဘူးလို့ပြောနိုင်တာမှ မဟုတ်တာ..
နတ်ဆိုတာနဲ့ အ၀င်ကြမ်းတော့မယ်လို့ တထစ်ချစွဲလောက်အောင်ကို
နတ်ဝင်သည်တွေကလဲ ကြမ်းတယ်နော် ..
နတ်တွေက အစိမ်းသေလို့ ဒေါသကြီးကြတာဖစ်မယ်..
သောတာပန် အနာဂမ် ကိတ်စတော့ စာဖတ်ရုံနဲ့ နားမလည်နိုင်ဘူး
ကျနော်တော့ ဇာတ်ပွဲဆို မိုးဝင်း မိုးမင်း ချမ်းသာ
ဒါပေသိ ဇာတ်မင်းသားတွေ ပြောတဲ့ ဇာတ်စကားတွေကို နားမလည်ပေမဲ့
နတ်တော်တော်များများ ကြမ်းတယ်ဆိုတာတော့ ဟုတ်တယ်ဗျ…
အဲဒီ နတ်ဒိုးသံက သင်္ကြန်ဒိုး တို့လက်ဝှေ့ဗိန်းဗောင်းတို့ ထက် လူ့ စိတ်ကို ပိုကြွစေတယ် မအိ..။
တစ်ချို့ လုပ်စားတွေ ကျတော့လည်း လူတွေကို ဖြဲခြောက်ချင်လို့ပိုကြမ်းပြတာ ရှိပါတယ်..
ချွင်းချက်ကတော့ ဦးရှင်ကြီးနတ်က အသိမ်မွေ့ ဆုံးပါဘဲ..
ကျုပ်လဲ ကျားကစားတာ အတော်ဝါသနာပါသဗျ…
ဒါပေသိ ကိုကျော်စွာခေါင် လို လက်တွေ့အပလိုင်း မလုပ်တတ်သေးဘူး…
နတ်ကို ကန်တော့တာတော့ သရဏဂုံပျက်တယ်လို့ မထင်မိဘူး..
ထုံးစံ အရမို့ ကန်တော့တာတွေကြောင့် သရဏဂုံ မပျက်ဘူးလို့ပဲ ဇွတ်ထင်ထားမိတယ်။
ကိုးကွယ်ရာအဖြစ် ကန်တော့မှသာ သရဏဂုံ ပျက်တယ်လို့ထင်တာပါပဲ…။
တနေ့ကတင် လသာဘုံကျောင်းမှာ အန်းကုန်းကြီးရယ် စစ်သူကြီးလိုလို သရဲမိစ္ဆာလိုလိုဟာတစ်ခုရယ်ကို
အဲဒါကို ပျော်လို့ (လျှောက်လည်ရင်းလုပ်တာ) အထဲ ထည့်လိုက်တယ်လေ…။
ကျနော် ကိုပါ့အယူအဆကို လက်ခံပါတယ်..
ကိုးကွယ်တဲ့သဘော မဟုတ်ဘဲ အဘိုးအဘွားမိဘကို လက်အုပ်ချီ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ သဘောမျိုးထားရင်
ရနိုင်တယ်လို့နောက်ပိုင်းတွေးတတ်လာပါတယ်…။
ဘုရားရှင်က သံသရာမှာ မတော်စပ်ဘူးတဲ့ ဆွေမျိုးမိဘ မရှိလို့ …ဟောခဲ့တော့..
သူ့ ဘ၀ပေး မကောင်းလို့အစိမ်းဘဲသေသေ အကျက်ဘဲသေသေ…
ကိုယ့်အဘိုးအဘွား မိဘ ဦးလေးအရွယ်တွေကို ဂါရ၀ ပြုတာဘဲလေလို့ …သဘောထားလိုက်တာပါဘဲ..။
ဖတ်လိုက်ရတာ ပျော်စရာကြီး …
အောက်က ကြည့်နေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့
အပေါ်မှာတော့ ဖိုက်တင် ပလေးနေကြပြီ …
ငယ်ငယ်တုန်းက ရွာမှာ နတ်ကပြီဆို သွားကြည့်တယ်
အဲ့ဒီတုန်းက နတ်ကတော် တစ်ယောက်က
ဖလားခွက်ကြီးကို လက်ကလေးပေါ် တင်ထားရင်း အောက်ကို မှောက်ပြတယ်
ဖလားခွက်က အောက်ကို ကျမသွားဘူးဗျာ
လက်ကလေးမှာ ကပ်ရပ်လေးပဲ …
အဲ့ဒီပြကွက်ကို အတော် သဘောကျခဲ့မိတာပေါ့ …
ဒါနဲ့ သူ့လို လုပ်ကြည့်ရော … ရတာပဲ …
သံကမ္ဘာလုံး တစ်ဝက်ခြမ်းထားတဲ့အထဲမှာတောင် ဦးမောင်မောင် ဆပ်ကပ်က ဆိုင်ကယ်စီးပြခဲ့တာလေ…။
လူတော်တော်များများက နတ်ပွဲကြည့်ပြိး အံ့သြပေမယ့် အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ကိုယ်တိုင်စမ်းမကြည့်ကြဘူး…
နတ်တွေ အရက်ပုလင်းလိုက်မော့တယ် မမူးဘူးဆိုတာလဲ ဧကရာဇ်မြစ်ကို ပါးစောင်မှာ ငုံထားတာ..
ကွင်းပိုင်ကြိးတို့ မဖဲဝါတို့ ဝင်ရင် အသားစိမ်းစားတယ်ဆိုတာ..
အမဲသားကို ရှာလကာရည်နဲ့ ကြိုစိမ်ထားတာ ..အရောင်က အသားစိမ်းဘဲ အထဲမှာ ကျက်နေပြီ.. ၁၀၀% တော့ မကျက်ပါဘူး
လူရှေ့ မှာသာ ဘာမှ မဖြစ်တာ နောက်ကွယ်မှာ အဲ့နတ်ကတော်တွေ ထိုးထိုးအန်တာဘဲ…
ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆို အရင်က ရေခဲသေတ္တာမရှိတော့ အသားစိမ်းတွေကို ယမ်းစိမ်းနဲ့ နယ်ပြီး ၀ါးဆစ်ပိုင်းထဲထည့် အလုံပိတ်ထားပြီး သဲမြေမှာ မြှုပ်ထားကြတယ် ..လိုတော့မှ ဖော်စားတာ …မပုတ်မသိုးဘူး..အံ့ဇာ။
အမှန်‌တိုင်း‌ပြောရရင်‌…ဒီပို့စ်‌မှာ ကွန်‌မင့်‌‌တွေပဲဖတ်‌ရပြီး စာ‌ရေးသူ‌ရေးထားတာကို‌
အိုသွားမှ ပိုပြိး တော်လာလိုက်တာ….။
ကွန်ပူတာနဲ့မှဖတ်ရသွားတယ်.. ဇာတ်ပွဲတွေနတ်ပွဲတွေတခါမှမကြည့်ဖူးလို့ ဘာမှန်းကိုမသိတာ.. ဦးခေါင်ရေးတော့မှတော်တော်လေးတီးမိခေါက်မိသွားတယ်.. ကိုယ်တွေငယ်ငယ်က ခံယူတတ်ပုံကတော့ အသက်၁၀နှစ်ကျော်ကြီးတဲ့ အစ်ကိုရင်းတွေနဲ့ကျားကစား.. ကိုယ်ကရှုံးတော့မယ်ဆို ဂျကုန်ကစားမှာနော်ပြော.. သူတို့ကကိုယ့်လောက်တော့အသာလေးပေါ့.. သူတို့အသာစီးပြန်ရသွားရင် ဂျနိုင်ကစားမှာနော်ဆိုပြီးညစ်တွန်းနည်းနဲ့ပဲကစားခဲ့တာ..
ဒါဆို ခွစ်လေးနဲ့ ဦးကြောင် နပန်းလုံးတမ်း ဆော့ချင်တယ်.. ခွစ်လေး အမြဲနိုင်စေ့မယ်.. ဘိုလဲပေါ..
အပျောက်ကို မခံတာနော်…ထပ်ချပ်ဘဲ..း)
အဖေနဲ့ ကျားကစားရင် ကိုယ်တွေ အမြဲရှုံးတာ…
ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်အကိုကျားထိုးနေတုန်း အဖေက ဘက်လိုက်ပြိး သူ့ သားဘက်က ၀င်ပြောလို့ ကိုယ် ရှုံးခြေမြင်ရင် ငိုချင်တာ ဘဲသိတယ်..။
မနက်စောစော ဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရလို့ ။
အတွေ့အကြုံတွေ ကို အိုင် မသွားအောင် ရေးတတ်တာကို ကြိုက်တယ်။
အကြောင်းအရာမျိုးစုံ ကို မထပ်အောင် ရေးနိုင်တာကို ကြိုက်တယ်။
ပေးချင်တဲ့ မတ်စိ (message)ကို ခပ်ပါးပါးထည့်ရေးတာကို ကြိုက်တယ်။
မျက်မျန်ကြီးတပ်ပြီး လူကို လိုက်မြှောက်နေတာဗဲ…
ဘာဟင်းချက်တုန်းးးးးး မ ကေဇီ။
ငယ်ငယ်က ဘဘဆန်စက်က လူယုံအဒေါ်ကြီးက ဆန်စက်မှာထိုင်ပြီးဆေးလိပ်သောက်နေရင်းက
နတ်စင်က ဆိုင်းသံဗုံသံတွေကြားပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထက နောက်ပိုင်းလမ်းပေါ်ပြေးထွက်သွားတာ
နတ်ပွဲထဲအထိရောက်ရော။ဟိုထဲရောက်တော့ နတ်ကတော်တွေကပုဝါတွေဘာတွေပေါင်းပေး စည်းပေးတာပေါ့။အဒေါ်ကြီးလဲကနေလိုက်တာ ဖတ်ဖတ်မော။
ပြီးလည်းပြီးရော ရှက်လို့တဲ့ ပြန်ပြောတိုင်းရှက်နေတာမှ။
အဲဒါကတော့ ကိုယ်တွေ ဘဲ..
ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ် အသိစိတ်ကို တစ်ခြားသောနာမ်အသိစိတ်တစ်ခုက ကပ်နိုင်ခွာနိုင်တဲ့သဘောက တော်တော် အံ့သြစရာ ကောင်းတယ်…။
ဒါပေမယ့် ဟိုလူကြီးကတော့ အရမ်းတော်တာပါနော်။ အနိုင်နဲ့ပိုင်းသွားတယ် မထင်ဘူးလား။ သူ့ကို ရှုံးတဲ့လူက သန်း ၆၀နီးပါး ။ ကိုယ်လည်း အပါအ၀င်။ ကလောင်ကလေးတစ်လက်တောင် ဒေါ်လာ ၆သိန်း မတန်သေးဘူး ဟီး ။
အိမ်ခြေယာခြေမဲ့နေတဲ့ကိုယ်မကောင်းတဲ့ယာစကာတစ်ယောက်တောင် နေ့ည ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် လူကြားကို သွားရဲတယ်…
သန်း၆၀ကို သူနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး….
( စကားမစပ်…ခင်လို့ သာ မျှစ်ကြော်လို့ခေါ်နေမိတာ… တစ်ကယ်တမ်းကျ မျှစ်ကြော်က နာမည်ကြီး စာရေးဆရာမဘဲ..
မျှစ်ကြော်ရဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်ချင်တယ်..)
ကျနော်တို့ က သမိုင်းလိမ်တွေကြားမှာ ကြီးခဲ့ ရတာ….
တဲ့…. သမိုင်းလိမ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို..သေချာဆက်တွေးကြည့်တော့မယ်…
ရာဇ၀င်နဲ့ချီပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေကို တွက်ပြလိုက်တော့……..
အခုလို လိပ်ခဲတည်းလည်းဖြစ်နေတဲ့ခြေဥကိစ္စဟာ.. တပ်မတော်အာဏာသိမ်းတာနဲ့…ပြတ်သွားမလားပဲ..။
ပြင်လို့မရအောင်ဆွဲထားတဲ့ ခြေဥကိုပြင်ချင်ရင်.. အာဏာသိမ်းပြီင်္းဖျက်… အသစ်ကပြန်စမှရလ်ိမ့်မယ်..။
၁) ဦးသိန်းစိန် ပြန်တက်ရင်.. ဒေါ်စုအာဏာမရ.. ဒေါ်စုအာဏာမရရင်.. အနောက်နိုင်ငံတွေ ဆာယိုနာရ
၂) ဦးရွှေမန်း သမ္မတဖြစ်ရင်.. ဘိုခင်ညွှန်နဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်..။ အခုစာဖတ်နေသူကြီးနဲ့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် လက်စားချေခံရ..
၃) ဒေါ်စုသမ္မတဖြစ်ရင်.. အနောက်နိုင်ငံတွေရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတက်..။ စာဖတ်နေသူကြီးနဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဘ၀ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာရာရ..။
Win-Win လိုချင်ရင်.. တိုင်းပြည်က… ၃ ဖြစ်မှ ရမယ်..။
သမိုင်းကို တလွဲနားလည်ရင် ရှုးမယ်တဲ့………အခုတော့လဲ……….:kwi:
မြန်မာတွေ နတ်တွေကို.. သူများဆီကခိုးထားတာမှာ…
၃၇မင်းဆိုတာ.. ဟိန္ဒူနတ်တွေကို.. မြန်မာအမည်ပြောင်းထားတာတဲ့..။ (ဟိန္ဒူနတ်တွေ ပိုသိသူ ရှိရင်.. စာရင်းတွက်ပြပါ)
အဲဒီကနေအရှိန်လွန်ပြီး.. မင်းအနော်ရထာက.. နိုင်ငံရေးနဲ့ဆွဲလှည့်ရင်း အရက်သမား..။ လူသတ်သမား..။ အရူး..အနူ..အသေဆိုးသမား..စသဖြင့်ထပ်တိုးလိုက်ကြတာ..
အဲဒါ.. အင်ပို့နတ်တွေတော်တော်များဆိုတာမို့… ကိုယ်ပိုင်နတ်အသစ်ကလေးများမလုပ်ချင်ကြဖူးလားရယ်လို့…
မှတ်ချက်။။ နတ် (Nut) “ဦးဦးကြောက်ကြောက်”
သေနတ်သံနဲ့ ဒီမိုကရေစီဒိုးကို Remix လုပ်ပီး ပင့်ကြည့်မယ်။
ဘာရယ်မဟုတ် သဂျီးက နတ်အသစ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့
အွမ်….. ဖတ်ပြီး မန့်ဖို့ကျော်သွားတဲ့စာပါလား